२० वर्षपछि भन्सार एजेन्टको विज्ञापन खुल्दै, यही वर्षभित्र लाइसेन्स दिनेगरी तयारी -
विभागले अघिल्लो वर्ष नै यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि यो प्रक्रिया यत्तिकै रोकिएको थियो । संक्रमण दर घट्दै गएको र खोप समेत आइसकेको अवस्थामा महामारी कम भएको आँकलनसहित तयारी अघि बढाइएको हो । त्यसका लागि १\_२ चरणको छलफल समेत भइसकेको विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरेले जानकारी दिए । विभागले नयाँ लाइसेन्स परीक्षाको पाठ्यक्रम र कार्यविधि समेत तयार गरिसकेको छ ।
कति जनाले पाउँछन लाइसेन्स ?
एजेन्ट थप्न महासंघको शतभन्सार एजेन्टको लाइसेन्स हुन नसक्नुमा यसअघि भन्सार एजेन्ट महासंघको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । नयाँ एजेन्ट थप्दा अहिले रहेका एजेन्टहरुको रोजीरोटी गुम्ने भन्दै महासंघमा आबद्ध सदस्यहरुले नयाँ भर्ना खुलाउने प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका थिए । अहिले भने महासंघ आफै लाइसेन्स खुलाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेको छ ।
व्यवस्थित गर्ने भनेको चाहिँ के हो त ? उपाध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधि भएर काम गरेका केही अरु मान्छे छन् । उनीहरुलाई एड्जस्ट भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । अहिले यस्तो प्रतिनिधिको संख्या ३ सय जना जति छ । त्यसमध्ये नियमित काम गर्ने एक/सवा सय मात्रै एड्जस्ट गरे पनि पुग्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिको व्यवस्था पनि हटाइदिए हुन्छ ।’